स्वास्थ्य पेज » सावधान, उपरखुट्टी लगाएर बस्दा हुन्छ यति घातक सावधान, उपरखुट्टी लगाएर बस्दा हुन्छ यति घातक – स्वास्थ्य पेज
सावधान, उपरखुट्टी लगाएर बस्दा हुन्छ यति घातक
खासगरी आफुभन्दा ठूलाबडा, गन्यमान्य व्यक्तिको सामुन्ने ‘उपरखुट्टी लगाउनु’लाई शोभनिय मानिदैन । उपरखुट्टी भनेको एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा चढाएर बस्नु हो । किन यसो भनिएको होला ? जसरी बसेपनि के भो ? बसाईको पोजिसनले पनि आदररअनादर जनाउँछ ?
हाम्रो मनमा यस्तै प्रश्न उठ्थ्यो । आखिर उपरखुट्टी लगाउँदैमा किन अरुलाई टाउको दुख्नुपर्ने रुखासमा पूर्खाहरुले जे जस्ता शिष्टचारका कुराहरु गरे र त्यसलाई पालना गराउने अनेक यत्न गरे, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै रहस्य हुन्थ्यो । त्यसको वैज्ञानिक कारण हुन्थ्यो । तर, हामीले ठान्यौं, बुढाहरुको आडम्बरी कुरा हुन् यी ।
३० भाद्र २०७८, बुधबार प्रकाशित